BASSADOR DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Bassador Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Basset Hound / Labrador Rabshadaha isku dhafka ah ee isku dhafan eeyaha
'Tani waa Ollie. Isagu waa isku-darka Basset Hound / Labrador Retriever. Waalidiinta Ollie labadoodaba waxay ahaayeen kuwo saaid ah oo milkiileyaasha midkoodna ma rabin isku dhafka sidaas darteed waxaan siinay guri. Waa eey aad u jecel aadna u cajaa’ib badan dadka, gaar ahaan waayeelka iyo carruurta. Isagu waa mid aad u jilicsan markii uu u baahdo inuu ahaado oo iskaa wax u qabso guryaha xanaanada sida xayawaanka xayawaanka ee giraangiraha. Dhinaca kale, isaguna aad buu u madax adag yahay oo wuxuu jecel yahay inay wax noqdaan shuruudihiisa . Tan waxaan ula jeedaa haddii aad rabto inuu soo galo gudaha, wuu sugi doonaa inta uu diyaargaroobayo, Haddii aad u yeerto magiciisa wuxuu u dhaqmayaa sidii inuusan halkan ku joogin. Wuxuu jecel yahay biyaha laakiin maahan inta badan dabaasha lugaha yar. Wuxuu jecel yahay inuu soo cesho !! Wuxuu leeyahay san weyn wuuna urin karaa gabi ahaanba wax walba. Wuxuu jecel yahay socodka laakiin sidoo kale wuxuu jecelyahay inuu ku ordo daarada deyrka ku leh. Heerkiisa tamarta kama sarreeyo sida Shaybaarka, laakiin wuxuu u eg yahay Basset Hound. Waxa kale oo uu leeyahay jilif haad basset ah! Isaga waa cunno aad u wada marka ay timaado tababarka, taasi waa hal dariiqo oo lagaa damaanad qaadayo inuu ku dhageysan doono. Ollie runti malaha wax dhaqan xumo ah, waa eeyga ugu fiican ee aan abid soo maro waxaanan kula talin lahaa iskudhafkiisa qofkasta oo raadinaya wehel wanaagsan naftooda ama xayawaan kale . '
Bassador ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Basset Hound iyo Labrador dib u habeyn . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Ollie the Bassador qiyaastii 2 sano jir
yorkie oo lagu qasay chihuahua
Ollie Bassador oo ah eey
'Ollie oo ah eey 9-toddobaad jir ah (bidix) iyo Ollie oo ah eey 11-bilood jir ah (midig) -waxaa ku yaal sawirka eeygayga Ollie. Isagu waa Basset Hound / Labrador dib u habeyn isku dar. Ninkayga iyo gabadha aan isqabno waxaan maalin ka hor nimid Ollie dukaan yar oo xayawaanka lagu kaydiyo. Qof baa isaga iyo walaalkiisba ka dejiyey subaxaas maxaa yeelay iyagu ma ay doonayn eeyo isku dhafan. Hagaag, iskama celin karno. Ollie ayaa ka weynaa labada wuu feejignaaday aadna u deggan yahay. Markii aan soo qaaday ayuu ku nuuxnuuxsaday gacmahayga. Waxaan aadnay guriga si aan uga fikirno arintaas maalintii ku xigtayna waan soo qaadnay. Walaalkiis ayaa la korsaday maalintii xigtay. Ollie wuxuu ahaa 2 bilood markii aan helnay haddana wuxuu ku dhow yahay 11 bilood. Isagu waa isku darka ugu fiican ee Basset Hound iyo Lab aan waligay arkay. Aad buu ugu wanaagsan yahay carruurta iyo xayawaannada kale waxaan qabaa inan yar oo abti iyo adeer u ah oo da'doodu u dhaxayso 5 ilaa 11 waana saaxiibkooda ugu fiican markaan guriga ku celinno (PA). Si wanaagsan buu ula shaqeeyaa labadayda bisadood, in kasta oo uu cayrsado oo ugaarsado guriga dhexdiisa laakiin waligood waxyeello uma geysan doono. Wuxuu hayaa sanka dushiisa oo wax walba urin kara. Wuxuu culeyskiisu yahay 47 rodol oo dhererkiisu wuxuu doorbidaa kan Basset Hound. Ollie waa mid aad u madax adag mararka qaarkood. Dibedda ugama saari karno xadhig la'aan maxaa yeelay wax buu uriyaa oo wuxuu u ordaa dhinaca ka soo horjeedka, laakiin haddii aan ku sugan nahay berrin bannaan ama meel ballaaran wuxuu u egyahay inuu nagu sii dhowaado Wuxuu bilaabay inuu qayilo beryahan, wax kasta oo afkiisa ku soo dhici kara laakiin wuu fiiqan yahay sidaas darteed isagoo waxoogaa canaananaya waa inuu fiicnaadaa. Tababbarka dheriga ma ahayn mid xun marka laga reebo inuusan ahayn qof cod badan markii uu doonayay inuu baxo. Marka waxaan go aansanay inaan gambaleelka lo'da albaabka dhigno hadana wuu garaacaa markasta oo uu banaanka u baxayo. '
hoon buluug gascon ah oo iib ah
Brody the Basset Hound iyo Labrador waxay isku jiraan markay 8 bilood jirsadeen
Brody the Basset Hound iyo Labrador waxay isku daraan qiyaastii 2 sano jir sariirta jiif
Brody the Basset Hound iyo Labrador waxay isku daraan sida eey
'Tani waa Kash 8 bilood jirkeyga Basset Hound iyo Labrador Retriever mix. Hooyadii waa dhiig buuxda Basset aabihiisna waa a shukulaatada . Wuxuu ka buuxan yahay tamar sida sheybaarka laakiin wuxuu u jilicsan yahay sida Basset. Wuxuu jecel yahay carruurta iyo dareenka. Wuu ku faraxsan yahay inuu haysto laf wanaagsan oo lagu calaliyo iyo qof ku xoqaya gadaashiisa dhagihiisa waaweyn ee dheer. '
buluug sanka buluug cawl iyo cadaan
Rocky the Bassador markii uu jiray 2 sano— 'Rocky waa kalabar Basset Hound kalabar Labrador. Isagu waa eey weyn, aad u hooyo ah, jecel bisadaha , iyo dadka, calalin kor wax kasta oo aan la qodbay oo jecel inuu gabyo.
Jake the Bassador at 2 sano jir ah xeebta— 'Tani waa Jake wiilkeena aadka u jecel, macaan, quruxda badan! Jake wuxuu jecel yahay ugaarsiga, kalluunka, iyo la ciyaarista alaabada uu ku ciyaaro. Waxaan ka qaadanay Jake hoygayaga deegaanka annagoo 10 bilood jira. Wuxuu leeyahay truley saaxiibkeena ugu fiican iyo wehelkeena. Waan ku jecel nahay wiil yar!
Jake Bassador markuu 2 sano jir ahaa kalluumeysi ayuu aaday
Sawirada Bassador 1
dhammaan tilmaamaha gaagaaban ee jarmalka jarmalka
madow lab col col mix mix puppy
muxuu u egyahay eeyga 20 rodol ah
god iyo isku dhafka buluug heeler
noocyada eeyaha ee ka bilaabma s